Aubergine miaraka amin'ny fomba voatabia Provençal | Bezzia
Aubergine miaraka amin'ny voatabia a la Provençal
Maria vazquez | 24/08/2021 10:00 | Salady sy legioma
Zucchini dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny resipeo tamin'ity volana ity. Saingy tsy io ihany no legioma vanim-potoana ahafahantsika manomana lovia lehibe. Ny atody dia safidy tsara ihany koa satria ho hitanao rehefa manandrana ireo ianao aubergine miaraka amina fomba voatabia Provençal.
Ity dia fomba fahandro izay mazàna dia masaka any atsimon'i Frantsa. ny fomba fahandro tsotsotra miaraka amin'ny baranjely ary ny voatabia amin'ny maha-protagonista azy ary ampiana singa vitsivitsy fanampiny. Ny fanomanana azy dia tena tsotra, na dia toy ny zavatra rehetra atao amin'ny hafanana ambany aza dia hampifaly anao mandritra ny adiny iray.
Satria fomba fahandro izay efa tao an-dakozia efa ela, ao amin'ny Bezzia izahay dia mamporisika anao hanomana ampahany tsara. Ny sakafo ilaina mba hahafahana mihinana andro roa. Mety ho tianao kokoa izany, ankoatr'izay, ny andro faharoa ary ity dia iray amin'ireo fomba fahandro izay fandresena azo nandritra ny alina. Sahinao ve ny manandrana azy?
1 Akora ho an'ny 2
Akora ho an'ny 2
550 g. aubergine, voasasa sy diced
Jirofo tongolo lay 1, voaharo
Divay mamy iray (González Byass Nectar Pedro Ximénez)
280 g. voatabia voajanahary
Ny ahitra provencal (thyme, oregano, rosemary, savory ...)
Arotsaho ny baranjely ary avelao izy hipetraka ao anaty colander mandritra ny 30 minitra mba hamoizany ny ngidiny.
Ao anaty vilany, hafanaina ny menaka oliva ary poach ny tongolo amin'ny hafanana ambany ambany mandritra ny 15 minitra.
Sasao avy eo, arotsaho ary ampio ny aubergine diced mankamin'ny vilany. Sasao mandritra ny minitra vitsy mandra-pahatongan'ny volontany kely ary avy eo ampio ilay tongolo lay voatoto ary afangaro indray.
Araraka avy hatrany ny divay mamy ary mahandro mandra-pahafatiny.
Avy eo, rakofana voatabia ny legioma potipotehina, vanim-potoana, ampio ny ravina bay.
Sarony ny kaserola ary avelao mahandro amin'ny afo malefaka mandra-pahalehiben'ny atody.
Aorian'izay, saraho ny kaserôla ary mahandro minitra vitsy hafa raha ilaina izany mba hihamafana ny voatabia.
Manaova vanim-potoana miaraka amin'ny ahitra Provencal ary aroso ny aubergine miaraka amin'ny voatabia Provençal
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Salady sy legioma » Aubergine miaraka amin'ny voatabia a la Provençal
Ny maha-zava-dehibe ny fitiavana marina amin'ny mpivady